प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना क्षेत्रमा फसेकी एक चेलीका दाइको भावुक पत्र — SuchanaKendra.Com
प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना क्षेत्रमा फसेकी एक चेलीका दाइको भावुक पत्र
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७६/१०/२६ गते
प्रधानमन्त्रीजी, यो कुनै सम्पादक वा लेखकको होइन, एउटा निरीह दाइको पत्र हो, जसकी बहिनी श्रीमान् र नाबालक छोरासहित चीनको वुहानमा कैद छे । त्यो कैदबाट निकाल्न अहिलेसम्म उसको कुनै देश छैन, उसको कुनै सरकार छैन र उसको कुनै प्रधानमन्त्री छैन । लगभग १० दिन मैले बहिनीलाई प्रधानमन्त्रीले बैठक डाकेको, पर्यटनमन्त्रीले जहाज तयार राखेको, दूतावासले प्रक्रिया सुरु गरेको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठाउँ खोजेकोजस्ता आश्वासनमा अल्मल्याएँ । तर, पछिल्ला १० दिन न मसँग आश्वासन छन्, न ऊ मेरा आश्वासन पत्याउने ठाउँमा छे । फोन रुवाइबाट सुरु हुन्छ र रुवाइमा टुङ्गिन्छ । बहिनी मात्र होइन, चीनबाट आउने हरेक फोनले मेरो शरीरमा काँडा उमार्छन् । डर, ग्लानि र हीनताले शरीर फतक्क गल्छ ।
म एक्लैले सक्ने भए सर्वस्व गरेर भए पनि बहिनीलाई फर्काउने थिएँ । तर, निरुपाय छु । उसलाई केवल तपाईं फर्काउन सक्नुुहुन्छ, तर तपाईंका नागरिक अरू नै छन् । अब मेरी बहिनी र ऊजस्ता एक सय ८० जना नागरिकका प्रश्न सुन्नुस् । उनीहरू सोध्छन्– यतिखेर पनि केही नगरे किन चाहिन्छ देश ? किन चाहिन्छ सरकार ? किन चाहिन्छन् प्रधानमन्त्री ? बहिनीलाई लाग्छ, उसको दाइ सम्पादक हो र शासकहरूसम्म उसका गुहार पुर्‍याउन सक्छ । तर, उसलाई थाहा छैन, यतिखेर शासकका प्राथमिकता के हुन् ? उसलाई थाहा छैन, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता के छ ?
मैले आजै मात्र सुनेँ, वुहानका केही विद्यार्थी उद्धारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेखिरहेका छन् । हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीले संसद्मा छिमेकी देशका नागरिक पनि उद्धार गर्न तयार छौँ भने भन्दै नेपाली विद्यार्थीको ग्रुप च्याटमा भारतीय दूतावाससँग सम्पर्क गर्ने सल्लाह भइरहेको छ । सुजितकुमार शाहले ग्रुपच्याटमा लेखेका छन्– हामी अरू कुनै विकल्प खोजौँ । नत्र नेपाल होइन, नेपाली नेताका नाममा बलि चढ्न तयार होऔँ ।अरे प्रधानमन्त्रीजी, तपाईं अब पनि कसरी बलियो सरकारको धाक लगाउन सक्नुुहुन्छ ? कसरी क्यामेराको सामना गर्न सक्नुुहुन्छ ? कसरी ऐना हेर्न सक्नुुहुन्छ ? तपाईं कसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सक्नुुहुन्छ ? नयाँ पत्रिकाबाट साभारः लेखक नयाँ पत्रिका दैनिकका संस्थापक/प्रधानसम्पादक हुन्